Posted by admin on August 24 2014 05:39:31
HS:-Mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha Soomaaliya iyo kan gudoomiyaha gobolka Hiiraan xaguu ku danbeyn doonaa? Part Two.
HS:- Inagoon ku dheeraaneyn siyaasada madaxweyne Xasan Sheikh iyo in ay wax iska cad tahay mudada u hartay isaga iyo masuuliyiinta aan ka xusi karno Prof Jawaari iyo r/wasaare Cabdiweli ooba hada xilkiisa lagu muransan yahay ma sanadkoow dhameysan doonaa iyo waa dhameysanaa in aysan dal iyo dad Soomaaliyeed waxbo u qaban karin waxaase qaracan iyo ayaan daro ah ineyba bulshada sanad iyo bar madax u sii ahaadaan.
Marka madaxweynaha laga soo tago waxaa laga yaabaa iney dad badan isweydiiyaan maxey siyaasada madaxweynaha iyo tan gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku bar bar dhigeen maadaama aysan aheyn labo xil oo isku miisaan ah iyo wax la mid ah, hayeeshee labadooda waxaa jira wax badan oo ay iska shaabahaan waayo midna waxuu ka tirsan yahay Dam-Jadiid midne waxuu ka tirsan yahay ururkii gabalkiisu dhacay ee Allaa Sheikh oo hada ku soo aruuray riyo maalmeed iyo armaad mar kale soo noqotaan iyo wax la mid ah.
Sidoo kale in aan gudoomiyaha gobolka Hiiraan C/Fataax Xasan Afrax iyo madaxweyne Xasan hal qoraal ka sameyno waxaa ugu wacan.
1- Ninkan dhalinyarada ah waxaa maskaxda ka heysta Sheikh Shariif oo aaminsan inuu soo barbaariyey xiligii maxkamadahane uu ku daray geber dumaashidiis ah oo la dhalatay xaaskiisa.Sheikh Shariif waa xaasas badnaaye,madaxweyne Xasan wey ku adag tahay inuu C/fataax wax ka dhaadhiciyo sidaasi daraadeed howsha Jowhar iyo Hiiraan waxaa loo marayaa oo Ina Xasan Afrax inuu ka soo dhameeyo u xilsaaran Sheikh Shariif howsha badankeedna dalka Kenya ayaa lagu dhameeyey.
Dhibaatada reer Hiiraan ka heysata wiilashaan intooda badan meelo Hiiraan ka baxsan laga hago marka ay sameeyaan wax bulshada Hiiraan niyada ka dila amaba uu siyaasad xumadooda dhib ka soo gaaro waxaa ku dhaca inkaarta shacabka.
Tusaale:Bal aan wax yar dib u jaleecno mid ka mid ah dhacdooyinkii Hiiran ka dhacay.
Xiligii magaca Xizbul Islaam lagu heystay magaalada Belet Weyne ayaa waxaa dhibaatadii ay shacabka kala kulmeen xizbigaas aawadeed,ayaa waxey telefon gebdho reer Hiiraan ah waliba ka soo jeeda beesha Xawaadle oo dalka iyo dibada ku sugan u direen ninkii ay Hiiraan u wakiisheeen Xizbul Islaam oo lagu magacaabayey Shuuriye. Ninkaasi dhalasho ahaan waa Xawaadle, jufada Cali Madaxweyne, Xaruun Cali Qolada la yiraahdo.
Gebdhahii waxey habeenkaas ugu talo galeen 4 saac oo telefon ah oo ay iyagu qarashka iska bixiyeen si ay Shuuriye uga dhaadhiciyaan inuu magaalada Belet Weyne ka joojiyo hoobiyaha uu ku garaacayo hadalkii uu yirina waxaa lagu wareysanayey waxa loo yaqaano Conference Call waa duuban yahiin dhamaan waxey kula hadleen.
Waliba gebdhaha mid ka mid ah ayaa tiri walaalow taariikhda wali nama soo marin nin familkaa oo magaaladiisii inta hub la soo siiyo la leeyahay burburi hadaad dibad rabtane anigaa ku keenayo wadan hebel ayaan ku noolahay. hadaad geber muslimad ah rabto oo aad ahalu diin tahayne anigaa diyaar kuu ah oo ooridaada noqonayo ee wadankaan iskaka soo tag iyo wax la mid ah ayey ku tiri mid ka mid ah duamrkii.waayo gebdhaha badankood wadanka mar hore ayaa ugu danbeysay waxey qaadan waayeen ninkaan damiir xumadiisa heerka ay mareyso oo aheyd meeshii ugu danbeysay.
Hadaba Shuuriye xaguu ku danbeeyey maanta?
Waxaa si silac ah u dilay kooxda Shabaab waliba intey god u qodeen oo ay godkii ku duugeen isagoo nool ayey madaxiisa oo kaliya sawiro ka qaadeen waxeyna nafta ka baxday isagoo hal gacan kor u taagaya naftuna ay ku daba yar tahay sawirkaas gebdhahii Shuuriye la hadlay siiba gebertii habeenkaas la gaartay ilaa ay tiraahdo walaalow aniga i guurso si uu shacabka hubka uu ku garaacayo uga dhaafo xitaa uma jixin jixin waliba dhamaan kuwa fidnada inta Hiiraan keena dadka ku barakiciyo inuu sidan iyo si ka xun ilaah u galo ayey reer Hiiraan badan aaminsan yahiin ilaa maanta.
Hadaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxuu joogaa meeshii ay habeenkaas kula hadleen dumarkaas Shuuriye oo hada telefono badan oo dibada looga diro intooda badana talo caafimaad qabto u badan ayuu u moodaa iney gacantiisa ku jirot mustaqbalka Hiiraan hayeeshee kuma jirto ee dadka la xariirayo Hiiraan oo nabad ah dadkuna helaan nolol ka wanaagsan mida ay hada ku jiraan ayey rabaan waayo Bulo Burde ayaa gaajo loogu dhimanayaa ina Xasan Afraxne howlo riyo u badan ayuu iskaka jiraa.
Talo adigaa ku nool ee iyadu kukuma noola Ninkaan dhalinyaradaa dhibaatada heysta shaley iyo maanta.
Shaleyto Sheikh Shariif ayaa kula taliyey inuu ka horyimaado maamulkii Hiiraan State Dooxadane ku dhawaaq yiri. Sheikh Shariif hadow horumar la doonayo ninkaan dhalinyarada ah markii uu diiday Hiiraan State maxuu Dooxada Shabelle u aqoonsan waayey? hadiise uu shaleyto ina Xasan Afrax siyaasada ku cusbaa maanta danta reer Hiiraan kama shaqeyn karo miyaa oo rabitaankooda kaalintiisa meesha uga aadan kama fududeyn karo miyaa?
Dhibaatada kale ee ay ninkaan dhalinyarada ah ka heysata siyaasada Hiiraan oo aysan shacabka Hiiraan ogeyn waa in uusan heysan cid kala talisa danta guud kaliya waxaa hogaan u ah xaaskii uu ka geeriyooda marxuum Cabdikariin Farax Laqanyo oo ahda u dhaxday gudoomiyaha gobolka Hiiraan.
Waa macquul in ay reer Hiiraan badan is dhahaan maxey gebedhaan ka rabaan dumaashida u ah reer Hiiraan, laakisne maanta maalin aan aheyn ayaan qoraal dheer ka soo diyaarin doonaa maadaama waxa Hiiraan ka dhacayo isku bedeli doonaan taariikh ee si wanaagsan ula socda reer Hiiraanow.
Haweeneydaas rumeysta ama ha rumeysanaha talada gudoomiyaha gobolka Hiiraan hadii uu wax ku dheelo ilaah ka sokow marka Shekh Shariif oo naceyb qabiil ku gaamuray laga soo tago iyadaa sabab u ahaan doonto.
1-Waa marka koobaade waa geber Ethiopian ah oo dhulka Ethiopia ku dhalatay markey doontana waxey sheegataa iney reer Puntland tahay,dhibta shacabka reer Hiiraan heysta oo dhan qiimo uguma fadhiyo.
Hadii ay Hiiraan nabad ka dhacdo iyadaanba laga dhamaaneyn waayo guriga ay hada magaalada Belet Weyne ka degan tahay oo horey u ahaa xaruntii boostada iyo sigaarsiinta gobolka waxaa ka dhaadhacsan iney iyada leetahay oo uu uga dhintay marxuum Laqanyo, dabcan qoraal dheer ayaan kaligeed ka soo sameyn doonaa si ay dad badan xog ogaal u noqdaan kaliya qarash bishii ku baxa iyada iyo sida ay shacabka Hiiraan gaajo uga dhamanayaan markaas kedib isweydii in waxa shacabka heysta ay tahay maamul xumo ee aysan aheyn cunto yari.
Danta reer Hiiraan waa sidan.
1-Reer Hiiraan waxey u baahan yahiin gogol nabadeed oo loo fidiyo shirweynane loo iclaamiyo si danta guud si aan koox kaliya loogu haleyn looga wadatashado.
2- Madaxtinimada Hiiraan tartan loo galo ninkastana calafkiisa halkaas ka raadsado rag iyo dumarba si mustaqbalka loola xisaabtamo.
3-Maamulkasta oo Hiiraan looga dhawaaqayo waa iney goobjoog ka ahaadaan qurbajoogta Hiiraan waayo waa iyaga dadka ugu horeeya oo laga doonayo iney maamulka dhaqaalo ku saacidaan inta uu isku filnaanayo, waana lama huraan in ay Hiiraan ka baxdo siyaasadan uu ina Xasan Afrax iyo kuwii ka horeyey iska dhaxleen ee xasaasiyada laga qabo aqoonyanada reer Hiiraan iney taalda wax ku yeeshaan loona yeero dhamaan qurbajoogta sidey u dhan yahiin intiiba ka imaan karto.
Hadii kale fudeydkii uu wiilku caanka ku ahaa iyo shisheeye kalkaalnimadii intuu halkeeda ka sii wado maamul jacbur ah ha iskaka dhawaaqo intuu odoyaasha masaakiintaa ee isbuuc gudahood labo bayaan oo isburinayo iska soo dabo saaray been u sheego maadaama ay daacad iska yahiin oo ay iyagu waxkasta oo ay sameynayaan wanaag uun ka tahay dhib badana soo areen qaarkoodna ay naftooda ku waayeen iyagoo Hiiraan wanaag la raba.
Isku soo duuboo ina Xasan Afrax waxuu joogaa maanta meeshii ay dumarkii kula hadleen Shuuriye Suuk, waliba madaxweyne Xasan Talooyinka la siiyey waxaa ugu weyn in xilka laga qaado hadii uu howsha Jowhar iyo Hiiraan fududeyn waayo marka isagey jirtaa hadii uu reer Hiiraan maslaxadooda eegayo iyo hadii uu........